I-China Iphelile Imveliso Ye-Rabies Vaccine, I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu, i-Live Biotechnology I-Pock Pox, i-Live Live Lyophilized Vaccination
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine,I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu,Live Biotechnology I-Pox Pox,Ukuphila ngokugonywa,,
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine,I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu,Live Biotechnology I-Pox Pox,Ukuphila ngokugonywa,,
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo
I-Varicella Vaccine (Live)
I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu
Umntu woqhagamshelo: Ms. Alice Zhang
Jonga Iinkcukacha zoqhagamshelwano
Iintlobo zeMveliso ze- Iimveliso ezigqityiweyo , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine , I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Jonga:  
Packaging: 1 isibalo / umntu x 1 umntu / ibhokisi. Enye ibhothi nganye ngekiti ehamba kunye nesitya esisodwa se-diluent ineritent inerito yokugonya.
Umzekelo No.: Penicillin Bottle
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine, Live, Ipenicillin Bottle [Igama leziyobisi ] I-Varicella Vaccine, Live [ Amaqhinga kunye neF F ] Isitofu senziwa sisasazo se-varicella-zoster virus (i-Oka strain) kwisityalo se-diploid yeseli (MRC-5),...
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine, Live, I-Syringe yangaphambili Iimveliso ezigqityiweyo zokugonya kwe-varicella. Unempawu ezintathu, ukhuseleko lwe-gelatin , ixesha lokuqinisekisa ngokuzinzileyo, ukukhuselwa kwe- b etter kunye ne-high...
Iimveliso ezigqityiweyo ze-Varicella Vaccine Live
Kwilingo leklinikhi elibandakanya abantu abayi-928 abaneminyaka engama-13 ubudala nangaphezulu ngaphezu kokugonywa ngumkhiqizo, ukulingana kwenani leentlobo zendlela yokuphendula ngayo i-28,76% eyona nto yayingumkhuhlane, nceda ubone i-table 3,...
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Pox vaccine
Imiphumo emibi kakhulu ayinqabile. Ukususela ngo-1998 ukuya ku-2013, kuye kwaxelwa ukufa okufanayo kuphela: umntwana ongumNgesi onomdla we-leukemia ngaphambili. Kwamanye amaxesha, iimpendulo ezinzima ziye zabikwa njenge- meningitis kunye ne-...
Inkukhu ye-Pox Vaccine I-Syringe ezaliswe ngaphambili
I-CDC incoma iipresenti ezimbini zegciwane lokukhupha i-inkukhu kubantwana, abaselula kunye nabantu abadala. Abantwana mabafumane amanyathelo amabini okugonya-i-dose yokuqala kwi-12 ukuya kwi-15 ubudala ubudala kunye neyesibini kwimizuzu engama-4...
I-PFS Inkukhu yePox Pox
Ukugula kugaleleke kwaye kungenaso isitofu, kunokusasazeka ngokuqhagamshelana ngqo okanye emoyeni ngokukrazula okanye ukukhwehlela. Kwakhona, umntu unokufumana ngokudibanisa nomkhuhlane ovela kwi-chickenpox blisters. Ngenxa yoko, abantwana...
Iimveliso ezigqityiweyo zeVicic vaccine
[Isitoreji] Ukugcinwa kunye nokuthuthwa ngekhendi ebandayo ebumnyameni phakathi ko-2-8 ℃. [Ukupakisha] I-white fluey pellet ye-vaccine ye-lyophilized is in one 2ml flagrant made of glass borosilicate. 1 isibalo / umthamo womntu × 1 idosi yomntu /...
PFS I-Varicella Vaccine I-Attenutated Lyophilized
Kutheni i-ACIP ihlaziya iziphakamiso zayo zokongeza i-dose yesibini yokugonywa kwe-varicella kubo bonke abantwana? Kwiminyaka elishumi emva kokugunyazwa kwelayisenisi yokugonywa ngo-1995, kukho ukuhla kwehla kwiphilisi ye-varicella, kunye...
I-Syringe Varicella I-Vaccin I-Live ephilileyo
C ommon ukusabela okubi: (1) Ngokuqhelekileyo kwisithuba seeyure ezingama-24 emva kokugonywa, intlungu kunye ne-haphalgesia zenzeka kwindawo yokuxela, kwiimeko ezininzi, ziya kuphelisa ngokuzenzekelayo. (2) Ngokuqhelekileyo kwiiveki ezi-1-2 emva...
I-Syringe Varicella I-Vaccine Intenutated
[Inkcazo] I-vial iqukethe i-0.5 ml yamanzi ngokuchithwa kwesitofu sokugonywa nge-lyophilized with diluent. Isigodlo sokugonywa esinezixhobo eziqukethe i-PF ye-varicella-zoster virus kwaye isetyenziswe kwisifundo esisodwa kwisilinganiso
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Chicken Pox i-Attenuated
Kucelwa uhlaziye iziphakamiso zesiganeko sesibini somgudu wokugonya wonke umntu, kuquka nabantwana. I-ACIP isincoma ukuba bonke abantwana bafumane i-2 doses ye-vacic varicella rhoqo. Inqanaba lokuqala kufuneka linikezelwe kwiinyanga ezili-12 ukuya...
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Chicken Pox Live
Ukuba umqeshwa ononophelo lwempilo akanalo imbali ye-varicella yokugonywa okanye isifo kodwa uye wafumana imeko yechungechunge ye-shingles, ngaba ufuna ukuba ugonywe i-varicella? Umntu ojongene nokunyamekela ngempilo okanye ukuqinisekiswa kwimbali...
Iimveliso ezigqityiweyo zeNkukhu yePilisi ye-Pox i-Attenuated Live
Ngubani ofuna i-Chickenpox vaccine Abantwana abangaphantsi kweminyaka engama-13 kufuneka bafumane amanani amabini Umthamo wokuqala kwi-12 ukuya kwi-15 inyanga I-dose yesibini kwiminyaka emi-4 ukuya kwe-6 I-dose yesibini inokunikezwa ngexesha...
The Varicella zoster vaccine is made from the Oka/Merck strain of live attenuated varicella virus. The virus was initially obtained from a child with natural varicella, introduced into human embryonic lung cell cultures, adapted to and propagated in...
Iimveliso ezigqityiweyo zeNkukhu yePox Pox
Phantse ama-5% wabantwana abafumana isitofu sokukhusela bavelise umkhuhlane okanye ukugqithisa. Iingxelo ezichaphazelekayo zokuphendula ngethuba lonyaka ka-1995 ukuya ku-2005 alufumani nanye ukufa okubanjelwe kwisitofu sokugonya nangona amayeza...
The varicella vaccine is not recommended for seriously ill people, pregnant women, people who have experienced a serious allergic reaction to the varicella vaccine in the past, people who are allergic to gelatin, people allergic to neomycin, people...
I-PFS Inkukhu yePox Pox Intenuated
UMbutho WezeMpilo Wehlabathi ucebisa isisindo esisodwa okanye amabini ngeqondo lokuqala elinikwe kwiinyanga ezili-12 ukuya kwezi-18 ubudala. Inqanaba lesibini xa linikwe kufuneka lenzeke ubuncinane kwiinyanga ezintathu ukuya kwezi ezintathu. Olu...
Inkukhu ye-Pox Vaccin Iimveliso ezigqityiweyo ziPhilile
Ngaphambi kokungeniswa kwesigonyo ngo-1995 e-United States (ekhutshwe ngo-1988 eJapan naseKorea), kwakukho amacala angama-4 000 000 ngonyaka e-United States, ikakhulukazi abantwana, ngo-10 500-13,000 abangeniswe esibhedlele (aba-8,000- 18,000),...
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Pox vaccine Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Chicken Pox i-Attenuated Qhagamshelana Ngoku
Finished Products of Vaccine for Chicken Pox Lyophilized Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zentsholongwane ye-Chicken Pox Live Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zeNkukhu yePilisi ye-Pox i-Attenuated Live Qhagamshelana Ngoku
Finished Products of Chicken Pox Vaccine Lyophilized Live Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso ezigqityiweyo zeNkukhu yePox Pox Qhagamshelana Ngoku
Finished Products of Chicken Pox Vaccine Live Qhagamshelana Ngoku
I-PFS Inkukhu yePox Pox Intenuated Qhagamshelana Ngoku
Chicken Pox Vaccine Finished Products Attenuated Live Qhagamshelana Ngoku
Inkukhu ye-Pox Vaccin Iimveliso ezigqityiweyo ziPhilile Qhagamshelana Ngoku
KwiChina Iimveliso ezigqityiweyo Abaxhasi
Iimveliso ezigqityiweyo zokugonya kwe-varicella. Unempawu ezintathu, ukhuseleko lwe-gelatin , ixesha lokuqinisekisa ngokuzinzileyo, ukukhuselwa kwe- b etter kunye ne-high titer kunye nokusebenza komzimba. Ezi mphuculo zithuthukise ukhuseleko lokugonya kunye nobunjani, kwaye i-BCHT isungulwe isikhundla esiphezulu kwi-vaccine ye-varicella. Sinemaphakheji emibini eyahlukileyo, ibhotile ye- penicillin kunye nesirinji. Kwaye ithunyelwa kwamanye amazwe, njengamaNdiya, ePhilippines.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Iimveliso ezigqityiweyo ze-Rabies Vaccine , I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu , Live Biotechnology I-Pox Pox , Ukuphila ngokugonywa , Iimveliso eziqingqiweyo zeRabies Vaccine